7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Armodafinil
/blog/gallery/7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Armodafinil
Ihe na 09 / 11 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Amodafinil bụ ọgwụ psychostimulant nke Celphalon Pharmaceutical kpatara site na FDA na June 15, 2007. Amodafinil bụ (-) - (R) -enantiomer nke ihe na-arụsi ọrụ ike n'ime ụdị modafinil ọgwụ. Armodafinil bụ isomer nke ọgwụ modafinil (Progivil)
Armodafinil uzuzu, dịka modafinil, nwere ụzọ atọ dị mkpa:
• Na-akwalite edemede n'ụra nke ụra na ụbụrụ
• Ọ bụ ọgwụ eji eme ihe maka ịdọpụ uche nke ụmụaka na ndị okenye
• A na-eji ya na ndị mmadụ na-aghaghị ime mgbanwe n'usoro, ebe ọ na-enye ohere iji zere ụra nke nwere ike ịmepụta oge awa a na-agbanwe n'ọhụụ nke ndị mmadụ.
• Ọ na-eji ụfọdụ ụmụ akwụkwọ mee ka nchekwube dịkwuo mma.
Ụlọ ọrụ Cephalon chọkwara ka ha na-eduzi ọmụmụ ihe na ebumnuche nke ịtụle armodafinil (Nuvigil) maka ịgwọ ọrịa ndị ọzọ na-adịghị ala ala dị ka ọrịa bipolar, ịme ihe ike, na ụra na ike ọgwụgwụ na ọnọdụ dịka ọrịa Parkinson na cancer.
Armodafinil Ntinye mmeghe
Armodafinil bụ onyinye nke eugeroidal modafinil (Provigil). Ọ na-agụnye naanị (R) - (-) - enantiomer of racemic modafinil.
Aha ahia Nuvigil
CAS Mba .: 112111-43-0
Ụdị ahụ: ọcha siri ike
Ebe ntanetị: 559.1oC na 760mmHg
Mgbanwe Vapor: 1.56E-12mmHg na 25 C
Nkọwapụta Refractive: 1.645
A kwadoro ọgwụ ahụ na United States maka ọgwụgwọ oke ụra ehihie na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa afọ nke 18 nke metụtara ọrịa ọrịa mịnchi na-achikota obstructive (OSAS), narcolepsy, ma ọ bụ ọrịa na-arụ ọrụ na-agbanwe.
Nkọwa dị mfe nke Armodafinil ntụ ntụ
Ihe ngosi maka armodafinil yiri modafinil. FDA na-ekweta na almodafinil dịka ọgwụgwọ maka narcolepsy, ọrịa ụbụrụ na-ehi ụra na nsogbu ụra na-arụ ọrụ, Alzheimer's, disorders.
Amodafinil bụ L-mododafin na ọ bụ ingredient na-arụsi ọrụ ike na modafinil. 200 mg nke modafinil n'aka ekpe na n'aka nri modafinil nke ọ bụla na-agụnye ọkara, mana eji aka nri modafinil na-ere ọkụ maka awa 4, njedebe dị ntakịrị, modafinil were 2 awa Ihe ọ pụtara bụ na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ọbara bụ ruru 4 awa. N'elu elu kachasị elu, L-mododa na-ekwu banyere 90%, na njedebe aka nri na-ahapụ 10%. Mgbe awa nke anọ gasịrị, Moda na-arụ ọrụ dị mkpa. Ọ bụ L-mododafin. Mmetụta nke amodafinil dị ike. Ọ bụrụ Moda na-agba mbọ ịmụrụ anya, Amoda nwere ike ilekwasị anya na ịmụrụ anya, lekwasịkwu anya, ma nwee mmetụta dị nta. N'ikpeazụ, ọ ga-eji dochie modafinil. Amoda nwere okpukpu atọ maka nchedo protein plasma, ya mere ọ nwere ike ijikọta protein na plasma karị. Ya mere, itinye uche nke amoda nke na-abanye ụbụrụ na ọbara dị elu. Njikọ enyi Amoda maka ụbụrụ bụ ugboro atọ nke Moda.
Ọkara ndụ nke amodafinil bụ 13-15 awa. Mmetụta mmetụta dị ntakịrị.
Nchịkọta na-aga n'ihu nke amodafinil, itinye ọgwụ ndị dị na ọbara ga-anọgide na-adakọ, ebe ọ bụ na etinyebeghị ọgwụ ọjọọ ọbara ochie ahụ, ọgwụ ọhụrụ ahụ abanyewo na ọbara, na-aga n'ihu na-ewere amodafinil ga-egbu oge nrịta ọbara nke ọbara.
Armodafinil na - eme ka ndị ọrịa na - ata ụra nke ukwuu. Ọ na-arụ ọrụ ya site n'inwe ụfọdụ ndị ntanetwọtị na ntanetransmitter ma na-akpali usoro nchegbu ọmịiko. Ejighi ama usoro mmemme, dika Modafinil. In vitro, enweghi ike igosi XAUMX -adrenoceptor - ma ọ bụ agonist nke na-anabata ọrịa dopamine. Ikike nke armodafinil iji nọgide na-enwe ntụrụndụ yiri nke amphetamine, ọ bụ ezie na ọ dị iche na ya na profaịlụ profaịlụ.
Ọnụ ọkara nke ndị ọgbọ abụọ nke modafinil dị iche site na otu ihe nke 3 site na ibe ya. Ndị na-ahụ maka ọgwụcokinetics nke Armodafinil bụ ndị nweere onwe ha na ọgwụ na linear na 50 na 400 mg. A na-etinye ọgwụ ọjọọ ngwa ngwa ma na-edozi na imeju na abụọ metabolite ukwu. Armodafinil na ndị metabolites na-emekarị ihe site na akụrụ. Na ndị ọrịa na-arịa ọrịa hepatic siri ike ma ọ bụ na ezughị ezu, a ghaghị belata dose ahụ.
Armomafinil bụ ọgwụ ọnụ. N'ahịa, dị ka usoro, nkọwa ahụ bụ 50 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg. Maka ndị nwere mormalia, a ga-eduzi ha na 150-250 mcg kwa ụbọchị.
Akwukwo nke P450 3A4 na-eme ka Powodafinil kwadoro ya ma mechiekwa ụfọdụ subtypes nke ezinụlọ P450 enzyme ezinụlọ cytochrome. Enwere ike inwe mkparịta ụka na ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ, nke na-emechi ma ọ bụ na-eme ka ụdị ihe ọkpụkpụ P450 dị na cytochrome. Ndị a na-agụnye ụfọdụ ọgwụ mgbochi oral, ọgwụ ọjọọ maka ọgwụgwọ ọrịa mgbochi (anticonvulsants), anticoagulants (anticoagulants), antidepressants ma ọ bụ cyclosporine immunosuppressant.
Ihe kpatara nsogbu kachasị njọ bụ: isi ọwụwa, ọgbụgbọ, dizziness, nsogbu ụra. Armodafinil nwere ike ime ka mmeghachi omume dị nro dịka rashes ma ọ bụ hay fever. Mmeghachi ahụ dị nro na-esi ike, dịka ndị ahụ na-ahụ ụdị mpofinil, gụnyere ọrịa Stevens-Johnson, anaghị ewepụ ya ma chọọ ka a kwụsịchaa ọgwụgwọ.
1.Armodafinil na Modafinil bụ ọgwụ na-abụghị amphetamine nke na-akwalite wakefulness ma nyere ndị mmadụ aka iguzogide iku ume ụra, narcolepsy ma ọ bụ ụra oké ụra na-arụsi ọrụ ike. ... Na mbụ, a na-eji Modafinil agwọ ọgwụ ọjọọ na imeziwanye ntụrụndụ
2. Armomafinil dị n'ụdị 50 mg / 150 mg / 200 mg / 250 mg. Modafinil dị naanị 100 / 200 mg.
3. Ọrụ Armodafinil bụ 15 awa, ebe Modafinil uzuzu bụ 12 awa. Mmetụta nke Armodafinil bụ awa 8, ebe Modafinil dị 6 na 12 awa.
4. Farmafinil na-ebutekwu elu mgbe e mesịrị, ihe mere eji nweta ngwa ngwa bụ ogologo oge, oge dị ogologo karịa Modafinil. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na iwere 150 mg nke Armodafinil, a ga-achọ 200 mg nke Modafinil. N'ihi oru irighiri oge, Armodafinil uzuzu a na-ewere na ọ kachasị mma nke abụọ ahụ, ọ bụ ezie na ndị ọkachamara ahụike na-ekwu na ha abụọ bụ ndị yiri ya, ihe ndị na-esi na ya pụta bụ otu.
Iji kpebie iji ọgwụ ahụ eme ihe, uru nke iji ya kwesịrị ịbụ ihe na-emerụ ahụ, gị na dọkịta gị ga-ekpebi ma ị ga-eji ọgwụ ahụ ma ọ bụ.
I kwesiri ichebara echiche:
Enyochaghị ọmụmụ ihe nke ọma na mmekọrịta dị n'etiti afọ na mmetụta nke armodafinil na ụmụaka karịa 17 afọ. Enweghị nchebe ma rụọ ọrụ nke ọgwụ a.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe ọmụmụ e mere na mmekọrịta dị n'agbata afọ na mmetụta nke armodafinil na ndị agadi, nsogbu ndị metụtara ịka nká anaghị atụ anya ka ha ghara iji ohere eji eji armodafinil eme ihe n'ahụ ndị agadi. Otú ọ dị, ndị agadi nwere ike ịnwe iwepụ ọgwụ a n'ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ, nke nwere ike ịchọrọ nhazi mgbanwe maka ndị ọrịa na-enweta armodaphine.
Nhazi nke armodafinyl na ime ime bu (C). Ọmụmụ ihe ụmụ anụmanụ egosiwo mmetụta na-adịghị mma nakwa na enweghi ọmụmụ zuru oke banyere afọ ime mmadụ. Enweghị ọmụmụ ụmụ anụ na ọ nweghị ọmụmụ zuru oke banyere ime afọ mmadụ.
Lezie anya, a maghị ma ọgwụ a ọ na-apụ n'ime mmiri ara ara mmadụ.
Mmekọrịta na mmekọrịta ọgwụ ọjọọ
Ọ bụ ezie na e kwesịghị iji ọgwụgwọ mee ihe n'otu akụkụ n'akụkụ ọ bụla, n'ọnọdụ ndị ọzọ, a pụrụ iji ọgwụ ọjọọ dị iche iche mee ihe ọnụ ọ bụrụgodị na ha nwere mmekọrịta ọgwụ ọjọọ. Na nke a, dọkịta gị na-amanye ime mgbanwe ahụ, ma ọ bụ ndokwa ndị ọzọ nke nwere ike ịdị mkpa. Mgbe ị na-ewere ọgwụ a, ọ dị mkpa na dọkịta gị maara ma ọ bụrụ na ị na-ewere ọgwụ ọ bụla edepụtara n'okpuru ebe a. Ahọrọ nhọrọ ndị a na-adabere na ịdị mkpa ha dị mkpa, nke na-abụchaghị ihe niile.
Ọgwụ ọjọọ na-emekọrịta ihe Armodafinil uzuzu
A gaghị eji ọgwụ ụfọdụ mee ihe na ma ọ bụ gburugburu oge iri ma ọ bụ iri ụfọdụ ụdị nri n'ihi na mmekọrịta dị n'etiti ọgwụ na ụfọdụ ụdị nri nwere ike ime. Iji mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ụtaba pụkwara ịkpata mmekọrịta ọgwụ ọjọọ. Gị na dọkịta kwurịta ka ị na-eji ọgwụ a eji nri ma ọ bụ mmanya, ma ọ bụ ụtaba.
Nsogbu ọgwụ ndị ọzọ
Ọnụnọ nke nsogbu ahụike ndị ọzọ nwere ike imetụta ojiji nke ọgwụ a:
Mmetụta ịda mbà n'obi ma ọ bụ inwe akụkọ ihe mere eme nke ya, ma ọ bụ ọbara mgbali elu, anya, ma ọ bụ psychosis: jiri ọgwụ na-eji ọgwụ ahụ eme ihe. Ọnọdụ ndị a nwere ike ịka njọ.
Mgbanwe ọbara ventricular aka ekpe, ma ọ bụ valve valve dara: ekwesịghị iji ya na ndị ọrịa nwere ọnọdụ ndị a.
Ọrịa imeju (siri ike): eji nlezianya mee ihe. Mmetụta nke ọgwụ ahụ nwere ike ịbawanye ụba n'ihi nkwụsị ya na-ewepụ ngwa ngwa.
Jiri ya mee ihe
Were ọgwụ a naanị dị ka dọkịta nyere gị ntụziaka. Emela ka usoro ọgwụgwọ ahụ dị elu, ma ghara ịba ụba ọnụ ọgụgụ mgbe a na-aṅụ ọgwụ ahụ, ma ghara iji ya dị ogologo karịa dọkịta ahụ kpebiri.
Ọgwụ a na-abịa na Bulletin Information Patient (Bulletin nke Ụlọ). Ọ dị ezigbo mkpa ka ị gụọ na ịghọta ozi a. Jide n'aka na ị jụọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-ata ụra nke ụra ma jiri nrụgide ụgbọ elu na-aga n'ihu na abalị, nọgide na-eji ngwaọrụ a na ọgwụ.
Were ọgwụ a n'otu oge kwa ụbọchị. Adịghị agbanwe oge ị ga - eji ọgwụ ahụ na - ekwuteghị dọkịta gị.
Ị nwere ike iji ọgwụ a ma ọ bụ na-enweghị nri.
Tinyere ọgwụgwọ ọgwụ nke ọgwụ ọjọọ, ọgwụ a nwere ike ịkpata nsogbu ụfọdụ na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mmetụta ndị a nile nwere ike ime, ma ọ bụrụ na ị na-eme ya, ị chọrọ nlekọta ahụike.
Gaa dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ọ bụla n'ime mmetụta ndị na-esonụ metụtara gị:
Ogbugbu, ọkụ, flaking, akọrọ, ma ọ bụ ọnwụ anụ ahụ
Ọgba aghara, njigide, ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya
Ọsọ ọsọ ma ọ bụ obi mgbagwoju anya
urination ugboro ugboro
Ogbugbu siri ike na palpitations
Mee ka urination dịkwuo
Ọcha, ma ọ bụ akwa ọbara ọbara, ma ọ bụ ọkpụkpụ, ma ọ bụ akpụkpọ anụ
A jijiji na ụkwụ, ogwe aka, aka ma ọ bụ ụkwụ
Ọ dị ezigbo mkpa ka dọkịta gị nyochaa ọganihu gị na ọgwụ na nleta mgbe niile iji jide n'aka na ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na iji nyochaa na enweghi mmetụta na-adịghị mma.
Nri a anaghị edochi ebe iji nweta ụra zuru ezu. A ghaghị iji ọgwụ a mee ihe nanị ma a chọpụta ọrịa ahụ dị ka ihe na-emenye ụjọ-mgbarụ na-agwụ aghara, ụbụrụ nke na-egbochi ọrịa mgbochi (nke a na-akpọ ọrịa apnea), ma ọ bụ nsogbu ụra nke psoriasis kpatara.
Ọgwụ a nwere ike ime ka ụdị ọrịa ahụ dị njọ, gụnyere mkpụrụ ndụ ọbara na ederede.
Kwụsị jiri ọgwụ a ma hụ dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ndị a: ọnyá, ịkpụ akpụkpọ ahụ, ịcha ahụ, akpụ, ụkwara, afọ ọsịsa, ọkụ, ma ọ bụ nkwonkwo ma ọ bụ mgbu ahụ. Ma ọ bụ akpụkpọ ahụ ọbara ọbara. Ma ọ bụ akpịrị akpịrị; ncha, ma ọ bụ na-acha ọcha tụrụ na ọnụ ma ọ bụ egbugbere ọnụ. Ma ọ bụ ike ọgwụgwụ ma ọ bụ adịghị ike.
Ekwula ụgbọ ala, anaghị eji ígwè ọrụ, zere ime ihe ọ bụla nwere ike ịdị ize ndụ ma ọ bụrụ na ịnọghị njikere, yabụ ị maara otú e si emeghachi omume na ọgwụ a.
O nwere ike ime ka ụfọdụ ndị na-ewe iwe ma ọ bụ nwee àgwà ndị ọzọ dị njọ. O nwekwara ike ime ka ụfọdụ ndị chee echiche igbu onwe ha ma ọ bụ bụrụ ndị dara mbà.
Tupu ịme ule ọgwụ ọ bụla, gwa dọkịta na-elekọta gị na ị na-ewere ọgwụ a. Ihe nchoputa a nwere ike imetụta nsogbu nke ule.
Ejighi ọgwụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na agwaghị dọkịta gị okwu. Nke a gụnyere ọgwụ ndenye ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ ndị na-abụghị ọgwụ (OTCs), ihe mgbakwasị ahịhịa ma ọ bụ vitamin.
Na-echekwa ọgwụ ahụ na akpa a na-ekpuchi n'ime okpomọkụ dị ọkụ, na-ewepụ okpomọkụ, iru mmiri na ìhè ziri ezi.
Mee ka ọgwụ ahụ ghara ịdị na ụmụ gị.
Ejila ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ na-adịkwaghị mkpa.
Jụọ onye ọrụ ahụ ike gị ka ị ga - esi wepụ ọgwụ ọ bụla ị na - ejighịzi.
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke 10 kachasị mma nke Loss Powder 7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke -Phenylpiracet